Al-Shabaab oo qaarajisey mid ka mid ah odayaal Muddooyinkan gacanta ugu jiray | Gaaloos.com
Home » Layaab » Al-Shabaab oo qaarajisey mid ka mid ah odayaal Muddooyinkan gacanta ugu jiray
Al-Shabaab oo qaarajisey mid ka mid ah odayaal Muddooyinkan gacanta ugu jiray
Wararka naga soo gaaraya degmada Aw-Dheegle ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in la dilay oday dhaqameed magaciisa lagu soo koobay Cismaan Diini oo ka mid ahaa ergadii Baydhabo ku soo dooratay xildhibaanada Baarlamanka Somalia ee ka soo jeeda koonfur galbeed.
Odaygan oo 82 jir ahaa ayaa ka mid ahaa odayaal mudooyinkan gacanta ugu jiray Al-shabaab kuwaasoo dhowaan ay ka qabteen degaano ka tirsan Sh/hoose iyagoo ku eedeeyey iney ka qeyb galeen doorashada Baydhabo ka dhacday.
Al-Shabaab ayaa warbaahintooda ka sii daayey bilo ka hor, war sheegaya in odaygan iyo odayaasha la xiran ay ka towbad keeneen qaladka ay galeen sidaas awgeedna ay sii daynayaan.
Hase ahaatee, ehelada Cismaan Diini ayaa sheegay in Al-shabaab aysan sii deynin illaa markii ay qabteen, uusana waxba ka jirin cafiska loo fidiyey, waxayna xuseen in ugu dambeyn maanta lagu soo wargeliyey in la toogtay aabahood oo ka mid ahaa odayaasha caanka ah ee degmada Afgooye.
Al-Shabaab ayaa sheegtay iney xukun dil ah ku fulisay odaygan ka dib markii ay ku eedeysay inuu soo xulay Xildhibaano ay ka mid tahay haweenay magaceeda lagu soo gaabiyay Muno oo ka mid ah baarlamaanka Somalia, waxayna xuseen inuu maxkamadda Al-shabaab horteeda ka qirtay in uu ka mid ahaa odayaashii Baydhabo ku soo xulay xildhibaanada.
Title: Al-Shabaab oo qaarajisey mid ka mid ah odayaal Muddooyinkan gacanta ugu jiray